Konke malunga naloo Bass nguMeghan Trainor - Izinto Zobugcisa
Konke malunga naloo Bass nguMeghan Trainor
Oko ukusukela kwingoma ye-Spinal Tap 'Big Bottom' kuye kwenziwa i-analog phakathi kwesiphelo esisezantsi sesandi somsindo kunye nesiphelo esingasemva somfazi. Ngokungafaniyo nengoma ye-Spinal Tap, nangona kunjalo, uMqeqeshi ubhiyozela eyakhe yangasemva kule ngoma, iyenza ingoma malunga nokuzithemba kunye nomzimba oqinisekileyo.
Ukhuliswe kusapho lomculo kwisiqithi saseMassachusetts iNantucket, uMeghan Trainor ebebhala iingoma ukusukela wayeneminyaka eli-11 ubudala. Emva kokuba usapho lufudukele eCape Cod, abazali bakhe bakhela intombi yakhe isitudiyo sokurekhoda, apho uMeghan wayesebenza khona kwiingoma ngexesha lakhe lesimahla kwaye waya kwiminyhadala yomculo kwilizwe liphela.
UMeghan uphumelele ukhuphiswano lwengoma lwe-Sonicbids Tennessee ngo-2011 xa wayeneminyaka eyi-17, kwaye watyikitywa kwisivumelwano sokubhala ingoma nomshicileli we-Big Yellow Dog kanye ukuphuma kwesikolo. Ngo-2013, umphathi woQeqeshi kwi-Big Yellow Dog wambeka kunye noKevin Kadish, umvelisi oneminyaka engama-42 oqala ukubandakanya iingoma zikaJason Mraz ('Wordplay') kunye noStacie Orrico ('(Kukho ekufuneka ubekhona) ngakumbi ebomini') . Umqeqeshi, amakhredithi akhe okuqala okubhala aquka ukubhalela u-'DJ Tonight 'kunye' Ndiyasithanda isandi saLo 'kwiRascal Flatts' Buyisela umva i-albhamu, yenza umbono okhawulezileyo eKadish, kwaye esi sibini sidibene nothando lwaso lomculo wama-50s. Emva kokukhaba ujikeleze izimvo zamazwi kunye nomculo iiyure ezimbalwa, babenengoma ebhaliweyo.
UKevin Kadish wayenesihloko esithi 'Konke malunga neBass' ebhalwe kwincwadana yakhe xa yena noQeqeshi beqala iseshoni yabo yokubhala. I-Kadish ihlala icinga ukuba isihloko siyingoma malunga nokuphanga, kodwa waqonda ukuba kuya kuba kuhle kumculi we-hip-hop oyindoda-iklabhu yokujonga malunga nokukhangela umfazi onesiphelo esisezantsi. Xa wayethetha ngesihloko kuMqeqeshi, nangona kunjalo, wayeyithanda, kuba wayehlala esebenzisa ibinzana elithi 'Ndikho malunga naloo ____' ukubonisa into ayithandayo (umz. Konke malunga ne-burrito ').
Xa uKadish wathi isihloko, uMqeqeshi weza nento ethi, `` Ndikho konke malunga nezo bhasi, '' kwaye uKadishe wongeza isongezo, 'akukho treble.' Oku kwabenza ukuba baqale ngengoma, ababeyibhala ngokwembono yabasetyhini kunye neebhasi njengesikweko sokuphanga kwakhe. Nje ukuba siqale ukuyibhala, ndiyalukhumbula uncumo lwakhe xa esithi 'iintsini ezibhityileyo,' utshilo uQeqeshi Ukuzonwabisa ngeveki . 'Kulapho sajongana khona ngathi,' Asisoze sayenza le nto, kodwa ndilungile. '
Emva kokuba u-LA Reid evile le ngoma, watyikitya uMqeqeshi wakhe kwileyibhile yakhe, iirekhodi ze-Epic, apho wakwaziyo ukukhulula umculo njengowokuqala. Umshicileli wam naye wonke umntu uthe, 'Yingoma emnandi kodwa akukho baninzi abaculi abanokuyicula,' 'ukhumbule uMeghan. Kwaye kulapho LA Reid wayiva kwaye wayefana, 'Wena are igcisa. Yiba mnye, 'kwaye bendifana,' Kulungile! Masiyenze!''
Xa uQeqeshi ehambisa ingxelo awayeyirekhodile noKevin Kadish, uReid wayenomonde wokushiya ingoma ihleli endaweni yokuthumela ii-tweaks kunye nokudibanisa. Wayesazi ukuba uhlobo olumphephileyo lwalufuna ubuchule, yiyo yonke loo nto.
Ividiyo yomculo yengoma inesidiliya esidumileyo uSione Maraschino esenza isenzo esibi ngasemva. Iklip yayikhokelwe nguFatima Robinson, naye owenza uMichael Jackson 'Khumbula Ixesha' kunye noAaliyah 'Zama kwakhona.'
Le ngoma inovakalelo lwe-retro, kodwa ibandakanya izinto ezininzi zomculo zangoku ukuyigcina ikwangoku. Amazwi axhasayo 'shoo-bop', isiginkci sombane esine-tremolo esimanzi, ipiyano, ukuqhwaba izandla, i-saxophone kunye ne-organ yonke i-harken ibuyele kwisandi seqela lama-60s, kodwa ingoma ikwaqulathe ukuqhwatywa kombane kunye nesandi segubu esiqhelekile Yehip-hop. Ngelixa ilizwi lomqeqeshi livakala ngathi liza kusebenza ngo-1963 ongatshatanga, ukuhanjiswa kwakhe kukwi-rap vein kunye namazwi ngokuqinisekileyo ayengalifanelanga elo xesha (babengenayo i-Photoshop ngelo xesha).
UKevin Kadish wacinga ukuba uMqeqeshi kufuneka abe yimvumi kule ngoma, kodwa uQeqesho akazange azicinge njengomculi kwaye wagqiba kwelokuba ayidubule. Akakhange afumane bantu bathathayo-Umqeqeshi uthi inomdla kuphela uvela komnye wabantu bakaBeyoncé, kodwa bekungafanelekanga ngokufanelekileyo. Ezinye iilebhile zokurekhoda zicebisa ukwenza utshintsho kwingoma ukuyinika ngaphezulu isibheno, kodwa uQeqeshi uthathe isigqibo sokuba azirekhode ngokwakhe, eKadish ebongoza.
Xa umbhali wengoma ebhalela omnye umculi, uhlala ezibeka kwingqondo yelo gcisa, awayezama ukukwenza xa uQeqeshayo ebhala nomvelisi wakhe uKevin Kadish. Xa le ndlela isilele, bagqiba ekubeni babhale into ebanzi. Ndathi, 'Ndoda, kunzima ukuzibona njengoRihanna kwaye uzame ukumbhalela. Masibhale nje ingoma emnandi yokwenzela umhlaba, utshilo Uhlanga lonke kwiphephancwadi.
Bathathe isigqibo sokuba babhale 'Umhobe omkhulu omalunga nokuthanda umzimba wakho,' lowo uQeqeshwayo uhamba nomgca, 'Kucacile ukuba andinobukhulu be-2.'
Le yayiyeyona Hot Hot # # yokuqala ukufaka igama elithi 'bass' kwisihloko sayo. Umzila wangaphambili we-'bass 'ophakamileyo wawinguNicki Minaj' Super Bass, 'owawuyi- # 3. Ngelishwa, ii-Muppets ezithandayo 'Mnu Bass Man' ziphume kwi # 16.
Kudliwanondlebe kunye noKevin Kadish, wathetha ngengxabano ejikeleze le ngoma. Yonke le nto yahlekisa, utshilo. Abagxeki bazama ukuthi le ngoma yayichasene nabasetyhini. Yintoni abagxeki abangayiqondiyo kukuba le ngoma yayiyihlaya. Besingabizi kakhulu abantu ngokuthamba, kodwa andazi nayiphi na intombazana engakhange ibize enye intombazana ngokubhitya. Kwakungekho kuhlazeka komzimba okanye ukuhlambalaza okanye nantoni na. Yiza. Kwakungenangqondo ukubeka yonke loo nto kuyo, kodwa uyazi ntoni? Akukho nto inje ngokucinezela kakubi. Ndiyabulela ngayo yonke i-nitpicking yabo. '
Ngokufanelekileyo, ii-bass zibaluleke kakhulu kule ngoma. Yi-acoustic, i-bass ethe nkqo, eyongeza kwindalo ye-retro yomkhondo. Xa uQeqeshi ecula umgca, 'Akukho treble,' qaphela ukuba ii-bass ziyaphuma.
Omnye umdlalo okrelekrele kwi-bass / treble bit: Umqeqeshi utshintsha inowuthi xa ecula igama elithi 'bass' kunye nomgca 'akukho treble,' uyenza ukuba ibe sezantsi kwi-bass kwaye iphezulu ekuhambeni.
UMeghan uxelele kule ngoma, 'Amakhwenkwe ayathanda ukubamba ebusuku.' Ukuthetha no UMgcini malunga nengoma, wathi:
'Andizange ndibenangxaki yokufumana amakhwenkwe kwisikolo samabanga aphakamileyo, kwaye ndacinga ukuba yinto ehlekisayo leyo. Bonke abahlobo bam abahle, abadumileyo, abanobuqili babenengxaki yokufumana i-dude elungileyo, kwaye andikaze ndibenobunzima ekufumaneni umntu ongathandanga ukuba andithande okanye andithumelele imiyalezo. Kodwa njengombhali wengoma, bendicinga: Singasebenzisa ntoni kumgca olandelayo, emva, 'Mama, undixelele ungazikhathazi ngobungakanani bakho?'
Amacwecwe amabini ale ngoma afikelela nakwiseshoni yase-UK engatshatanga ngaxeshanye nenguqulelo yoqobo kaMeghan. Enye ye-Power Music Workout yenzelwe indawo yokuzivocavoca kwaye enye yinkwenkwezi ye-YouTube uMegan Tonjes sisimbozo sentsingiselo yomculo.
Le ngoma inesakhiwo esingaqhelekanga, ngaphandle kwebhulorho okanye isingeniso. Iqala kanye nge-chorus, emva koko ilandele ivesi-ye-chorus-ivesi-ye-chorus (B-A-B-A-B). Kuninzi okwahlukileyo ngaphakathi kwezi zinto, nangona kunjalo, kubandakanya ikhefu elincinci ukusuka kwinto enye ukuya elandelayo. Emva kokuba umqeqeshi ecule ikwayara yokuqala, umculo uyaphuma kwaye ilizwi eliqhubekekayo liphinda igama elithi 'bass' amatyeli amahlanu, akhokelela kwindinyana yokuqala.
I-chorus yesibini yandulelwa yi-pre-chorus enamandla, ethi 'mama wam undixelele ukuba ungakhathazeki ngobungakanani bakho'. Le khorasi yesibini ifana neyokuqala, kodwa uMqeqeshi uyayivala ngo 'hey!,' Ngaphambi kokuya kwivesi yokugqibela kunye 'nokubuyisa imbuyekezo'. I-chorus yokugqibela iphindaphindwe kathathu, ixesha ngalinye inyuka ngamandla. Imizuzwana eyi-12 yokugqibela inikezelwe ngaphandle, apho uQeqesho ecula amabinzana athile ngaphambi kokuvala ingoma ngokuhleka kancinci.
Le yayiyenye yeengoma kunye neevidiyo zokufaka iitshathi ehlotyeni lika-2014 ezazibhiyozela ubuhle bendalo babafazi. Abanye bakhululwe ngaxeshanye benomxholo ofanayo womzimba obandakanya umxholo kaColbie Caillat 'Zama' noJohn Legend ' Wena kunye nam (akukho mntu emhlabeni) . ' Kwacetyiswa ukuba le yayiyimpendulo ngokuchasene nomculo we-misogynist lyrical weengoma ezinje ngeRobin Thicke's 2013 hit 'Blurred Lines.'
Qaphela ukuba kunjani 'mama' othi abafana bathanda ukuphanga ebusuku. Oku kusebenza ngeenjongo ezimbini:
1) Yongeza kwingoma ye-retro, kuba ii-tunes ezininzi kwii-60s zakuqala zazinengoma malunga 'nomama' onika iingcebiso, oyena mntu ubalaseleyo ngu 'Mama Said' yi Shirelles.
2) Ishenxisa ingxelo isuke kuMqeqeshi, kuba ayinguye othabatha esi sikhundla, kodwa ngunina-udlula nje ngengcebiso. Oku kuza kuluncedo xa kuphambuka ukugxekwa ukuba le ngoma ihlazisa amantombazana amancinci.
UMeghan Umqeqeshi Wenze ingoma ngoku okokuqala kumboniso kaEmily West eNashville ngoJulayi 16, 2014 xa wayehleli kubaphulaphuli kwaye wabizwa eqongeni ukuba acule. UKadish uye wamkhapha xa edlala isiginci.
Uxelele uKevin Kadish Yena Iphephancwadi malunga nelinye igcisa eliphambili elithe ngokungangqalanga ladlulisela umculo ngaphambi kokuba uMeghan arekhode. 'UMiranda Lambert wayiva le ngoma ngaphambi kokuba uMeghan afumane isivumelwano sokurekhodwa kuba usibali wam utshatile nomqeqeshi kaMiranda, utshilo uKadish. UMiranda wayiva le ngoma kunyaka ophelileyo. Kwaye xa kufikwa kwii-CMA wayefana, 'Owu! Masenze loo ngoma. ''
Oku kuchithe iiveki ezisibhozo kwi # 1 e-US. Yayiyingoma ye-Epic erekhodiweyo ebaleka ixesha elide, egqitha iiveki ezisixhenxe zolawulo lukaMichael Jackson ' UBillie Jean kunye ' Mnyama okanye Mhlophe . '
Idatha evela kukhangelo lukaGoogle ibonisa ukuba impango ibuyile ngo-2014. Ngalo nyaka, kuwo onke ama-50, kwenziwa uphando ngeendlela ezininzi zokwenza impundu yakho ibe nkulu kunokukhangela ukuba inciphe, kulandela imeko yesizwe eqale ngo-2010. yayikukonyuka okubalulekileyo kuphando olunxulumene neebhokhwe ezinkulu ngeli xesha, zibonisa ukuba uninzi lwabasetyhini bajonge ukwenza ukuba amabhuthi abo abe makhulu, kwaye uninzi lwamadoda lwalufuna oko.
Lo yayingowokuqala ukungena kwi-UK Top 40 esekwe kwimilambo. Umkhondo ungene kwitshathi yomhla kaSeptemba 28, 2014 kwi # 33 ngeveki ngaphambi kokuba ifumaneke yokukhuphela okanye ukuthengisa ngokwasemzimbeni, emva kokurhola imijelo yesigidi se-1.17. Imithetho ibitshintshiwe ukuze kubalwe iingoma ezisasazwayo kwindawo yeetshathi kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo.
UKevin Kadish udlale ikatala kule ngoma kwaye wayicwangcisa i-bass kunye negubu. Emva koko wathumela le ngoma kwimvumi yaseNew York egama linguDave Baron, owongeze i-organ, isaxophone kunye nepiyano. UKadish emva koko wenza umxube wokugqibela, esebenzisa iingoma ezingama-33 kwizixhobo zePro, kubandakanya ezili-10 zokuxhasa izandi kunye nenye yeebhasi, ibhasi, ibhasi, ibhasi, ibhasi isampulu. Ngokubetha imigangatho yengoma yomculo, uKadish wayigcina ilula.
Umqeqeshi usenokungabi sisiSayizi 2, kodwa uTaylor Swift, kwaye uMeghan ukwazile ukunkqonkqoza uSwift's 'Shake It Off' ukusuka phezulu kwi-Hot 100 ngalo mzila, owahlala kwi # 1 iiveki ezisibhozo, xa wawudutyulwa ngu ... 'Yisuse,' eyabuyela encotsheni kwezinye iiveki ezimbini.
Umqeqeshi Isihloko I-albhamu ikwafudusile Swift kwi # 1 eMelika, ithatha indawo ephezulu ukusuka Ngo-1989 . Kwiiveki ezimbini kamva, Ngo-1989 wayebuyile ngaphezulu.
UKevin Kadish uthi le ngoma izakundixhasa ubomi bam bonke. Xa kususwe, wasayina isivumelwano sokushicilela esinenzuzo. Ingoma ayisiyiyo kuphela eyondlayo nangona. Ndithethile nomhlobo ngokupapasha wathi, 'Ayifani nento yokuba ubhale owesine kwirekhodi yesithathu kaDemi Lovato,' utshilo uKadish kwiNgoma zeNgoma. Ubhale ingoma etshintshe indlela amantombazana amancinci azijonga ngayo esipilini. Le ngoma iya kuba ngumtshintshi womdlalo kuwe. '
Ukuqokelelwa komculo emva kwexesha kweJukebox kuyiphindile le nto kwisitayile sejazz njenge 'Konke malunga naloo nto (Ethe tye) Bass,' kunye nomenzi weendwendwe uKate Davis udlala ngokuthe tye kwaye uphatha amazwi. Yayithunyelwe kwiYouTube kwangoko ngoSeptemba xa 'Konke malunga neBass' kwakusenyuka. Ngokukhawuleza yaqokelela izigidi zeembono kwaye yathathela ingqalelo enkulu kuDavis, umntu omtsha owayefunda i-jazz kwiSikolo soMculo eManhattan kodwa enqwenela ukuba ngumculi-umbhali wengoma kwiVen. Uninzi lwabazobi bayayoliswa luluntu oluza ne-viral hit, kodwa uDavis wayecinyiwe ziitroli kwaye waziva ebhokisini kumfanekiso awubonisileyo kwividiyo. Ugqibezele ukusayina isivumelwano sokurekhoda esingakhange sisebenze kuba ilebheli ibifuna ukuba abe yimvumi ye-jazz kwaye avelise ukubetha kwintsholongwane. Kwakungekho ngo-2019 apho wayecaca khona kwisivumelwano kwaye wakhupha i-albhamu yakhe yokuqala, Indebe .
'Le ntsebenzo ibuyisa nje yonke imbali yomculo wejazz, kodwa ngelensi engekho semthethweni, utshilo uDavis kudliwanondlebe lweNgoma. 'Ndingadlala, ndingazenza izinto endizichithe iminyaka ndisiya ekholejini ukuze ndigqibelele kwinqanaba lobugcisa, kodwa kwakungekho nto inovakalelo okanye enentsingiselo kum ngayo. Ndandikhule ndiqhele ukuziva ngathi ndenza inkawu ngelo xesha, kangangokuba ndandihamba nje. Anditsho ukuba abantu abathile khange bachaphazeleke kakuhle kwaye impendulo ibimxhelo mnye, kodwa ayinanto ndicinga ukuba ibaluleke kakhulu kubugcisa bam nakwintetho yam. '
imali ebambekayo engenanto lyrics
bayazi ukuba ziimvumi zekrisimesi
randy newman unetshomi kum
oh kutheni ukhangeleka ulusizi kangaka
michel oh ukuba ndiyakubamba